ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »3သင့်အနေဖြင့်ပြီးပြည့်စုံငယ်များကိုသံလိုက် Make မှသိကောင်းစရာများ!
လုံးဝဘာမျှမလုပ်ဆောင်သူအမျိုးသားရှိပါတယ်, သူတို့ကအမှန်တကယ်ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ထက်ပေမယ်ပိုမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအာရုံစိုက်ရတဲ့တက်အဆုံးသတ်. အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ယောက်ျားဖြစ်မှဖြစ်နိုင်သမျှသောအရာတို့ကိုကြိုးစားလွန်းသူများရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ရုန်းကန်ပင်တစ်ခုတည်းသောမိန်းမ woo မှ. အောက်ဘက်မှာတော့ဒုတိယအမျိုးအစားမှပိုင်ဆိုင်သည်လူတချို့အကြံပြုချက်များမှာ; အောက်ပါဤအကြံပြုချက်များကိုသူတို့အားယောက်ျားတစ်ဦးယင်းသံလိုက်ဖြစ်လုပ်သင့်အတိအကျဘာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အထောက်အကူပြုမည်.
သင်သဘာဝယင်းသံလိုက်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်အောက်ပါမျက်စိတိုင်း pair တစုံဟာကြည့်ရှုဖို့မမျှော်လင့်နိုင်ပါ. ဒါကြောင့်, သင်သည်လူမျိုး၏အုပ်စုတစုနှင့်ပြည့်စုံအခန်းတခန်းဝင်, ပထမဦးဆုံးသင့်နေကြပါတယ်ဘယ်လောက်ကနဦးကသဘာဝအာရုံကိုစူးစမ်းရှာဖွေရန်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်.
အခြားသူများကိုဖမ်းပြီးမှရီစရာဘာမှလုပ်ဖို့မကြိုးစားပါ’ အာရုံစူးစိုက်မှု; သင်ဆွဲဆောင်မှုမိန်းမတို့နှင့်အကြည့်ကို lock ရန်ဒီမှာကြပြီးလူရွှင်တော်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆက်သခြင်းငှါမမှတ်မိနေ. သင်တို့ကိုဧည့်ခန်းစကင်ဖတ်စစ်ဆေးအဖြစ်, သင်၌အတိုးဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အနည်းဆုံးလူတဦးတည်းပါတီရှာသင့်; သင့်ကိုကြည့်ရှုလျှင်သူမ၏မျက်ခုံးမြှင့်တင်နှင့်သင်မှာပြုံး, ပြုံးဖြင့်တုံ့ပြန်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတချို့ကြင်နာရှိသည်သူမ၏ရောက်ရှိဖို့ကြိုးစား.
သင်သည်အဘယ်သူမျှသင့်ရဲ့အကြည့်သော့ခတ်လိုက်တာနဲ့သို့မဟုတ်သင်မှာပြုံးအနှံ့သို့မလာကြပါလျှင်သင်သည်အဘယ်အရာကိုအံ့သြနေကြ? သင်ကနှောင့်နှေးတိုင်းတာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အဘို့အသွားလျှင်ဖြစ်ပေါ်လာရန်မဖြစ်နိုင်င်. အမျိုးသမီးအများစုဟာ (အထူးသဖြင့်အခန်းပျင်းစရာရှိလူများပြီးသားပစ္စုပ္ပန်ကိုရှာဖွေသူတွေ) ကိုယ့်အခန်းထဲဝင်ကြ၏သောသူလုံလောက်ခံထိုက်ပေ၏ရှိမရှိသိရှိရန်ဖတ်လိုက်ရကတည်းကပတ်လည်သို့ကြည့်ရှုဆက်; ဒါကြောင့်, နှေးနှေးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့သင်သည်ထိုသူတို့အနက်အနည်းဆုံးတစ်ဦးနှင့်အတူမျက်လုံးချင်းလုပ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟု.
ဤသည်နှင့်ကြိုးစားခဲ့နှင့် method ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေး; လောကမှာရှိတဲ့အကြီးမားဆုံးအမျိုးသမီးလူသတ်သမားပြုရာနှင့်ကြီးစွာသောအကျိုးရလဒ်ရရှိနိုင်. အမျိုးသမီးအာရုံစိုက်မှုကိုရရန်, သင်သည်ထိုသူတို့လျစ်လျူရှုတတ်ဖို့သင်ယူရပါလိမ့်မယ်. ဥပမာအားဖြင့်, သင်လေးခုသို့မဟုတ်ငါးခု၏အုပ်စုတစုအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသမီးသည်သင်တို့အထဲ၌စိတ်ဝင်စားမှုများပြသချင်တယ်ဆိုရင်, ကိုယ့်အဖွဲ့ကိုမှလျှောက်လှမ်းနှင့်သင်မြှူဆွယ်လုပ်ချင်တဲ့သူတယောက် မှလွဲ. အားလုံးမိန်းကလေးစကားပြော.
အမျိုးသမီးများ, သူတို့ဘယ်လောက်ဆွဲဆောင်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ချယုံကြည်နေပါစေ, ပဲလျစ်လျူရှုခံရဖို့ကိုမုန်း. သူတို့ကိုသုညအာရုံစိုက်သူတို့သည်သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်လေးမြတ်အနိုင်ရအရာတွေကိုစတင်သွားမှာကိုဆိုလိုတယ်.
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းသည့်အခါ, အစားအသင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းပြောနေတာ၏, သူမေးမြန်းသောပြဿနာကိုမေးမြန်း. မသက်ဆိုင်ဘဲမူလသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်, ပညာရေးဆိုင်ရာနောက်ခံနှင့်အလုပ်အကိုင်ရုံကိုယ့်ကိုယ်ပြောနေတာကိုချစ်. ဒါကြောင့်, သူတို့တစ်တွေကောင်းနာ​​းထောင်သူရဲ့သူတစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်တဲ့အခါသူတို့ပဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုချစ်; ယင်းသံလိုက်အများအားဖြင့်ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးနားထောင်တတ်သူများမှာ.
သူမ၏ဝါသနာအကြောင်းကိုမေးမြန်း, သူမ၏အိပ်မက်များကို, နှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကသူမ၏ဘဝ; သူမပြောမည်, ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆွေးနွေးချက်. သင်သည်သူမတစ်ဦးအကြံပေးချက်ကိုတောင်းလျှင်ကြောင့်အရှက်ရစေနိုင်ပါတယ်အဖြစ်သူမဂရုတစိုက်ပြောနေသမျှကိုနားထောင်နှင့်သင်အမှန်တကယ်သူမ၏မှနားမထောင်ခဲ့ကြသကဲ့သို့သင်တို့ကိုမပူဇော်နိုင်သေချာအောင်လုပ်ပါ.
တဦးတည်းပဲရှာဖွေနေနှင့်ကောင်းမွန်သောအနံ့ထက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်တစ်ယင်းသံလိုက်ဖြစ်ပြပွဲအပေါ်မှာအကြံပြုချက်ကြောင်း. အမျိုးသမီးအာရုံစိုက်မှုကိုရယောက်ျားတွေတခုအရင်ဖြားယောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှိရမည်; လူအပေါင်းတို့သည်အခြားအရည်အသွေးများလာမည့်လာ.